Xiaomi Mi 11T Pro: mobiil awood badan oo qiimo jaban lagu iibiyay | Androidsis
Emilio Garcia | | Aaladaha Android, Xiaomi
Xiaomi waxay dhowaan soo bandhigtay mid ka mid ah mobilada ugu awoodda badan qiimo macquul ah. Waa tusaalaha Xiaomi Mi 11T Pro, oo leh astaamo u muuqda moodel qaali ah, laakiin aan ku bixinayn kun euro. Marka, haddii aad rabto inaad ogaato faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan waxa noqon doona calanka shirkaddan inta lagu jiro xilli wanaagsan, halkan waxaa ah wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaato.
1 Astaamaha farsamada ee Xiaomi Mi 11T Pro
1.1 SoC iyo xusuusta
1.5 Isku xirnaanta iyo siyaado
1.6 Nidaamka hawlgalka
1.7 Naqshad samee oo dhammee
2 Sida loo helo Xiaomi Mi 11T Pro qiimo dhimis
Astaamaha farsamada ee Xiaomi Mi 11T Pro
Xiaomi Mi 11T Pro ayaa leh qaar astaamaha farsamada taasi waxay kugu reebi doontaa afkaaga oo furan. Wax yar bay ka maseertaa Samsung Galaxy S-Series iyo Apple iPhone oo qiimahoodu ka badan yahay 900 euro.
SoC iyo xusuusta
Xiaomi Mi 11T Pro waxay dooratay inay koriso mid ka mid ah jibbaarada ugu awoodda badan suuqa, the Qualcomm Snapdragon 888. Cutub lagu soo saaray farsamada 5nm ee TSMC, si loo yareeyo isticmaalka loona kordhiyo waxqabadka. Iyada oo leh 8 Kryo 680 cores oo taageero weyn leh.LITTLE oo awood u leh inuu bixiyo waxqabadka ugu sarreeya marka loo baahdo, iyo adeegsiga diirimaadyada ugu waxtarka badan marka aan awood badan la bixin si loo badbaadiyo nolosha batteriga.
Kala xisaabtan 1x Cortex X1 oo ah 2.84 Ghz, 3x Cortex-A78 oo ah 2.94 GB, iyo 4x Cortex-A55 oo ah 1.8 Ghz. Waxa kale oo ka mid ah mid ka mid ah garaafyada ugu awoodda badan suuqa, sida Adreno 660 GPU oo awood u leh inuu taageero OpenGL 3.2, OpenCL 2.0 FP, iyo Vulkan 1.1 API, iyo sidoo kale DirectX 12. Wanaagsan oo run ah oo loogu talagalay ciyaaraha fiidiyowga ee aadka u baahida badan iyo barnaamijyada.
Waxa kale oo ay taageertaa UFS 3.1 si dhakhso loogu helo xusuusta. Oo waxay dooratay qaabaynta 8-12 GB ee nooca RAM LPDDR5. Marka laga hadlayo xusuusta gudaha, waxaa laga heli karaa 128GB iyo 256GB.
Waxay sidoo kale isku daraysaa soo -saareyaal kale sida Qualcomm Spectra 580 oo mas'uul ka ah muuqaalka sawirka iyo fiidiyaha, Hexagon 780 DSP oo loogu talagalay socodsiinta signalada dhijitaalka ah, fidinta vector -ka si loo dardargeliyo howsha, iyo Dareemayaasha Tensor iyo Scalar codsiyada sirdoonka macmalka ah. Marka la soo koobo, waxqabad xad -dhaaf ah oo mobilada yar ay ku raaxaystaan.
Moobilkani wuxuu leeyahay fantastik 6,67 ”shaashad. Guddi weyn oo AMOLED ah kaas oo soo bandhigi doona madmadow aad u saafi ah iyo badbaadin baytariga oo aad u fiican. Xalkiisu waa FullHD +, oo ah, 2400x1080px, oo leh cufnaanta sare ee pixel, iyo saamiga dhinaca 20: 9, si aad ugu raaxaysato waxyaabaha badan ee warbaahinta. Waxay ku taageertaa TrueColor midabka hodanka ah iyo HDR10 +.
Ciyaartoyda iyo taageerayaasha fiidiyaha, waxaan u doorannay inaan u isticmaalno qiime aad u sarreeya, 120 Hz. Intaa waxaa sii dheer, heerka cusboonaysiinta shaashadda taabashadu waa 480 Hz, kaas oo ku siin doona is -dhexgal toos ah si aad ula falgasho.
Marka la eego adkaysiga, shaashadani waxay leedahay muraayaddii ugu dambaysay, sida farsamada Corning Gorilla Glass Victus. Waa nooca 7aad ee ilaalinta noocaan ah, wuxuuna ballanqaadayaa inuu u adkeysan doono dhibcaha ilaa 2 mitir oo aan jabin iyo ka hortag fiican oo ka dhan ah xagashada.
Hadaad ubaahantahay kamarad dijital ah oo xirfad leh oo jeebkaaga ku jirta, Xiaomi Mi 11T Pro waa waxa aad u baahan tahay, maadaama ay leedahay kamarad weyn oo badan. Waxay ka kooban tahay 108 MP f / 1.75 OIS sensor. Oo waxaa kaabaya 8 MP f / 2.2 iyo 120º sensor-xagal ballaadhan, iyo 5MP f / 2.4 telemacro oo ah 7 cm OIS. Kaamiro awood u leh qabashada sawirro leh tayo aad u wanaagsan, marka lagu daro duubista fiidiyowga 4K.
Kaamirada hore ayaa waliba aad ugu fiican wicitaanada fiidiyaha iyo selfie -ga, oo leh 16 MP dareemayaal kiiskan, iyo aperture focal of f / 2.45.
Si loo xoojiyo bahalkan, Xiaomi waxay isticmaashay batari weyn oo Li-Ion ah oo leh awood 5000mAh, taas oo ah, awood u leh inay gaarsiiso hadda 5 amps hal saac markiiba. Tani waxay ku siin doontaa madaxbannaani aad u ballaaran, illaa 22 saacadood celcelis ahaan waxay ku xiran tahay adeegsiga.
Intaa waxaa dheer, waxay taageertaa lacag aad u degdeg ah 120W, si baytarigu ugu soo laabto 100% ilbidhiqsi isha. Haddii lacagta lagu isticmaalo xawaare buuxa, batteriga ayaa si buuxda loogu dallaci doonaa 17 daqiiqo oo keliya.
Isku xirnaanta iyo siyaado
Xiaomi Mi 11T Pro wuxuu leeyahay taageero Tiknoolajiyadda 5G, si aad ugu dhex socoto xogta xawaaraha ugu sarreeya, inkasta oo ay sidoo kale taageerto 4G LTE haddii aadan weli shabakaddan ku lahayn aaggaaga. Waxa kale oo ay leedahay isku xira USB-C si lacag looga qaado ama loogu xiro kombuyuutarka ama aaladaha kale, Bluetooth 5.2, NFC, iyo WiFi 6.
Dhinaca kale, waxay leedahay isla akhristaha farta akhristaha, sidoo kale taageero Dual SIM, inay awoodaan inay ku rakibaan ilaa laba kaar oo SIM ah si ay ugu adeegsadaan laba lambar oo kala duwan isla qalab, sida shaqada iyo shaqsiga ...
Leh a Nidaamka hawlgalka ee Android 11, oo leh dhammaan adeegyada GMS. Sida caadiga ah, Xiaomi waxay isticmaashay lakabkeeda wax -ka -beddelka MIUI 12, nidaamkan Google. Is -dhexgal kaas oo siiya taleefanka qaar ka mid ah yutiilitida iyo shaqooyinka si loo hagaajiyo adeegsiga.
Waxaad had iyo jeer yeelan kartaa waxqabadkii ugu dambeeyay, waxqabadka, iyo dhejiska amniga, maadaama aad awooddo si fudud u cusbooneysii OTA.
Naqshad samee oo dhammee
Terminalkani waa iftiin, iyadoo la tixgelinayo cabbirka shaashadiisa, maadaama uu miisaankiisu yahay oo kaliya Gram 204. Sida cabbirrada, waxay yihiin 164.1 × 76.9 × 8.8 mm. Terminalka waxaa lagu heli karaa midabyo dhammeystiran oo kala duwan oo laga dooran karo: madow, caddaan, casaan, jaalle, cagaar iyo buluug.
Waxay sidoo kale leedahay tafaasiil muhiim ah, sida Shahaadada IP53 taas oo ka dhigaysa mid u adkaysata boodhka iyo dareeraha daadanaya. Intaas kaliya ma aha, waxay sidoo kale ku qalabeeyeen Xiaomi Mi 11T Pro oo leh nidaamka kala firdhinta kuleylka qolka uumiga, sidaa darteed waxaad ku raaxeysan kartaa barnaamijyada iyo ciyaarta ugu baahida badan adigoo ilaalinaya heerkulka wanaagsan ee processor -kaaga.
Sida loo helo Xiaomi Mi 11T Pro qiimo dhimis
Haddii aad jeclaatay Xiaomi Mi 11T Pro, waad heli kartaa hadda oo leh qiimo dhimis 50% ah on Aliexpress. Waa inaad kaliya halkan guji. Halkaas waxaad ka dooran kartaa laba ka mid ah xulashooyinka la heli karo:
Xiaomi Mi 11T Pro oo leh 8 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo xusuusta gudaha ah - € 615,56
Xiaomi Mi 11T Pro oo leh 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo xusuusta gudaha ah - € 842,87
Adiguna keebaa ku qanciyay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Xiaomi Mi 11T Pro: mobiil awood badan oo qiimo jaban lagu iibiyay
Durba waa run: Xiaomi Mi 11 Lite NE ayaa timid guryaheena